The Ab Presents Nepal » १२ वर्षिया बालिकालाई विगत डेढ वर्षदेखि आलोपालो गर्दै करणी!
१२ वर्षिया बालिकालाई विगत डेढ वर्षदेखि आलोपालो गर्दै करणी!
वीरगंज । बारामा एक साता भित्रै दुईवटा करणीको घटना भएको छ। १४ वर्षीया बालिकालाई आफ्नै बाबुले करणी गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को घटना सतहमा आएको छ। पहिलो र दोस्रो घटना बारा निजगढ नगरपालिका भित्र भएको हो। पहिलो घटनामा आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा रक्सी खाएर ४२ वर्षीया बुवा तिर्थबहादुर सुनाले आफनै छोरीको करणी गरेका थिए।’
अहिले एउटै परिवारका बाबुछोरा मिलेर एक १२ वर्षिया बालिकालाई विगत डेढ वर्षदेखि आलोपालो गर्दै करणी गर्दै आएको बारा प्रहरीले बताएको छ।’
यो घटनाको क्रममा निजगढ नगरपालिका वडा नं ४ कछडिया टोल बस्ने वर्ष ४० का मिनबहादुर माझी र १९ वर्षिय रिकेश माझीलाई ईलाका प्रहरी कार्यालयले करणीको मुद्दामा ५ दिनको म्याद थमाई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पीडित परिवारको असार ११ गतेको जाहेरीको अधारमा सोही दिन यी दुबैलाई पक्रउ गरी अनुसन्धान भइरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी नायब निरीक्षक विजयदास बानियाँले बताए। पीडित बालिका पक्राउ परेका मिनबहादुरको काकाको छोरी अर्थात बहिनी र रिकेशको फुपु पर्ने प्रहरीले जनाएको छ। पीडित बालिकाको आमा पोइला गइसकेकी र बाबु वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्’।
उनको संरक्षण गर्ने हजुर आमाको पनि निधन भइसकेकोले उनी एकलै घरमा बस्दै आएकी थिइन्। एकलै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा कहिले बाबु र त कहिले छोरा मिलेर करणी गर्दै आएको पीडित बालिकाको बयान छ। पछिल्लो पटक असार ८ गते बालिकाको दाई पर्ने मिनबहादुरले र गत जेठ २० गते भतिज पर्ने रिकेशले राति साढे ११ बजेको समयमा जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीमा परेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
यसअघि आफ्नै छोरीलाई बाबुलाई करणी गरेको आरोपमा पनि बारा प्रहरीले जबरजस्ती मुद्दा चलाई सुनारलाई हिरासतमा राखेको बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक रन्जीतसिंह राठौरले बताएका छन्। यस्ता घटनाले मानवअधिकारकर्मी तथा महिला अधिकारकर्मीहरुलाई दुखी बनाएको प्रतिक्रिया पाइएको छ। अधिकारकर्मीहरुले हदैसम्मको सजायको माग गरेका छन्’।